merolagani - एनआईसी एशियाकोे डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड भिषा नेटवर्कमा आवद्ध नेपाल -भारतका एटीएममा पनि सञ्चालन हुने
एनआईसी एशियाकोे डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड भिषा नेटवर्कमा आवद्ध नेपाल -भारतका एटीएममा पनि सञ्चालन हुने
Oct 05, 2019 04:28 AM Merolagani
एनआईसी एशिया बैंकको भिषा डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड केही समयको लागि यस बैंकको एटीएम मेसिनहरुबाट मात्र सञ्चालन भइरहेकोमा असोज १८ देखि नेपाल तथा भारतका भिषा नेटवर्कमा आवद्ध अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका चिप तथा पिन स्वीकार गर्ने एटीएम मेसिनहरुमा समेत संचालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
बैंकका कार्डवाहकहरुले २४ घण्टामा नेपालमा तीन पटक गरी हरेक पटक २० हजारका दरले अधिकतम ६० हजार रुपैयाँ रकमसम्म झिक्न सक्नेछन् । यसै गरी भारतमा २४ घण्टामा दुई पटकमा गरीे हरेक पटक भा.रु. १० हजारकाका दरले अधिकतम भा.रु. १५ हजार रुपैयाँसम्म झिक्न सक्नेछन् ।
यससँगै यस बैंकको डेबिट, क्रेडिट तथा प्रिपेड कार्डहरु भिषा नेटवर्कमा आवद्ध भएका अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पस मेसिनहरुमा समेत चल्ने व्यवस्था यसअघि नै मिलाइएको छ । यस बीचमा प्राविधिक कारणले आदरणीय ग्राहक महानुभावहरुमा पर्न गएको असुविधाका लागि बैंक क्षमाप्रार्थी छ ।